Hai Phong, i-Vietnam
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Quang
- Izinsiza zesimanje
- Ukuphepha nokwamukela 24/24.
- Isevisi yokuqasha izithuthuthu.
- Ukusekelwa kokuvakasha kokubhuka namathikithi omoya anezaphulelo ezinkulu.
- Isevisi yokubhuka indawo yokudlela yasolwandle uma ucelwa.
- Itiye lamahhala, ikhofi namanzi amaminerali nsuku zonke.
- Isevisi yansuku zonke yokugcina indlu yezivakashi ezihlala izinsuku ezi-2 noma ngaphezulu.
- Isevisi yamahhala yokuwasha yamakhasimende ahlala ngaphezu kwezinsuku eziyi-7.
- Isaphulelo kumakhasimende ahlala ngaphezu kwezinsuku eziyi-7: isaphulelo esingu-10% noma mahhala ngobusuku obu-1 obengeziwe.
- Kukhona indawo yokudlela yaseNeptune egxile ekuhlinzekeni ngokudla kwasolwandle okusha, okuseqophelweni eliphezulu, nokuqinisekisa ukuphepha kokudla. Ikheli: 8b Lô 22 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Itholakala eduze nesikhungo sezitolo iBigC, iParkson Plaza (500m)
- UThuan Tien uya esikhumulweni sezindiza i-Cat Bi (2km), uhambe uye e-Do Son beach, Cat Ba Island.
- Itholakala eduze kwe-Ho Dieu Hoa, amakhasimende angakwazi ukudoba, ukuzivocavoca, ukuphuza ikhofi ...
- Eduze kwase-Hai Phong Port, City Opera House, Food Market, Cat Bi classifieds paradise, Hoa Lung Market, Hang Market ...
Sizohlala sikhona ngenxa yakho!
Hlola ezinye izinketho ezise- Hai Phong namaphethelo